पढ्नुका फाइदाहरुः तनाव घटाउँछ, स्मरण शक्ति बढाउँछ, निद्रा लगाउँछ - krishnarm.com.np
Home » पढ्नुका फाइदाहरुः तनाव घटाउँछ, स्मरण शक्ति बढाउँछ, निद्रा लगाउँछ
पढ्नुका फाइदाहरुः तनाव घटाउँछ, स्मरण शक्ति बढाउँछ, निद्रा लगाउँछ
प्रविधिमय आजको यो युगमा धेरैले प्रबिधिको फाइदा लिइरहेका छन् भने कतिपयले फेसबुक, टिकटक, इन्सटाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेका छन । सामाजिक सञ्जालहरुमा समय खेरफाल्नु भन्दा पढ्नु मनोवैज्ञानिक र संज्ञानात्मक हिसाबले निकै उपयोगी हुने धेरैजसो शोधले देखाइसकेको छ । जीवनमा सकारात्मक रुपान्तरणका लागी पुस्तक अपरिहार्य छ, पढाइ अति आवश्यक छ । अंग्रजीमा एउटा भनाइ नै छ, “गुड रिडर इज द गुड लिडर” / “Good Reader is the good leader”. यो अत्याधुनिक समयमा आफुलाई अपडेट राख्न र विकास भइरहेको नयाँ प्रविधि र प्रवृत्तिसँग सहज भइरहनका लागी पनि पुस्तक पठन आवश्यक छ ।
विभिन्न विद्वानहरूले पढ्नुका विविध फाइदाहरु देखाएका छन् । तीमध्ये केही फाइदाहरु यस्ता छन्ः
२. मस्तिष्क शक्ति बढाउँछ / मष्तिस्कलाई जवान राख्छ
पोषण र सन्तुलित भोजनले शारीरिक विकासमा सघाउ पुर्‍याएजस्तै पठनले मानसिक विकासमा त्यत्तिकै महत्व राख्छ । नियमित पठनले मस्तिष्कको शक्तिसमेत बढाइरहेको हुन्छ । हिँड्दा जसरी तपाईंको कार्डियोभास्कुलर प्रणालीले नियमित काम पाई शरीर तन्दुरुस्त पार्छ, पढ्ने क्रममा आएका शब्द तपाईंको दिमागमा घुमिरहँदा मस्तिष्कले काम गर्ने अवसर पाउँछ । जति बढी काम पायो, मस्तिष्क उति सक्रिय हुन्छ र जुन अङ्ग सक्रिय भयो, त्यसले दिने परिणाम पनि उति नै राम्रो हुन्छ । एउटा अध्ययनअनुसार, साहित्य पठनले अन्य व्यक्तिबारेको बुझाइ बढाउँछ । त्यस्तै यसले अघिल्तिर व्यक्तिको अनुहारको हाउभाउ पढ्न सक्ने पनि बनाउँछ । जो मानिस पठन तथा रचनात्मक गतिविधिहरुसँग जोडिइरहन्छन्, उनीहरु सँधै केही नयाँ सोच्छन् । उनीहरुको मस्तिस्क यस्तो नगर्ने मानिसहरुको तुलनमा ३२ प्रतिशतसम्म जवान रहन्छ ।
३. ध्यान केन्द्रित गर्न सघाउँछ:
छोटा ब्लग र समाचार पढ्ने धैर्य र पूरै किताब पढ्ने धैर्यबीच फरक छ । किताब पढ्नेहरुमा बढी धीरता हुन्छ । धीरता बढी हुने व्यक्तिले आफ्नो सोचलाई केन्द्रिकृत गर्न सक्छ । किताब पढ्न बाहिरी संसारबाट पूरै विच्छेद भई बस्नुपर्ने हुन्छ । यो विच्छेदले तपाईंभित्रको सचेतता बढाउँछ । पठनले एकाग्रतालाई बढाउँछ । कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्न उक्त कामप्रति अधिकतम एकाग्रता हुन अनिवार्य छ ।
किताब पढ्दा तपाईंलाइ त्यसका पात्र, हाउभाउ, पृष्ठभूमि, तिनका महत्वाकांक्षा, इतिहास र कैयौँ साना कुराहरु याद आउँछ । किताबमा गाँसिएका स–साना उपकथा पनि सम्झनु हुन्छ । मोटा किताब पढ्नुका फाइदा के हुन्छ भने आवश्यक परेका बेला ती उपकथा स्वाट्ट अन्य प्रसङ्गमा जोडिएर आउँछन् । ती प्रसङ्गले तपाईंको सिर्जनशीलता बढाउन सहयोग पुर्याउँछन् ।
किताब पढ्नुको एउटा फाइदा यो पनि हो । युनिभर्सिटी अफ ससेक्सले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार पढ्दै नपढ्ने व्यक्तिको तुलनामा दिनमा कम्तिमा पनि ६ मिनेट पढ्ने बानी भएका मानिसहरुको तनाव सहज बनाउने, मांशपेसीको दबाब खुकुलिने गर्छ । पुस्तक पढ्नाले तनाव बढाउने हार्मोन अर्थात कार्टिसोल कम हुन्छ । जसले गर्दा तनावको तह स्वाट्टै तल झर्ने गर्छ । काम वा पारिवारिक झन्झटको जतिसुकै बढी तनाव होस्, पढ्न बसेपछि त्यो तनावको स्तर घट्छ । तनावग्रस्त अवस्थामा दिमागमा आउने निरर्थक कुराहरुमा लगाम कस्ने काम किताबले गर्छ र, तनाव कम हुन्छ ।
अमेरिकाको माया क्लिनिकले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार निद्रा कम लाग्ने वा नलाग्ने मानिसलाई किताब थमाइदियो भने स्वाभाविक निद्रा लगाउन सहयोग गर्छ । सुत्नुअघि टेलिभिजन हेर्नु भन्दा किताब पढ्नाले राम्रो निद्रा लगाउने पनि उक्त अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित मुलुकहरुमा भने किताबको साटो इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरु इबुक वा ट्याब्लेटमा पढ्ने बानी विकसित हुन थालेकामा भने चिन्ता गर्न थालिएको छ । तिनले निद्रा चोर्न थालेको चिकित्सकहरुको निष्कर्ष छ ।
जसले बढी पढ्छ, उसको शब्दसामर्थ्य बढी हुन्छ । जसको शब्दसामर्थ्य राम्रो हुन्छ, उसले लेखेको बढी बुझिने हुन्छ । अर्कोतर्फ बढी पढ्ने व्यक्तिमा अन्य राम्रा लेखकको प्रभाव नजानिदो किसिमले घुसेको हुन्छ । त्यो राम्रो प्रभावका कारण त्यस्ता व्यक्तिका लेखनीमा स्पष्ट झल्किन्छ । समयक्रममा लेखनीमा परिष्कार हुँदै एउटा भिन्दै शैली बन्ने हुनाले बढी पढ्ने व्यक्तिका कुरा बढी पढिने पनि हुन्छ ।
८. स्मरणशक्ति बढाउँछः
पढ्ने बानीले स्मरणशक्ति बढाउँछ, तेज गराउँछ । स्मरणशक्ति बढाउने दाबी गरिएका कैयौं औषधिहरु पनि बजारमा उपलब्ध हुन सक्छन् तर, स्मरणशक्ति तेज बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका पुस्तक पढ्नु हो ।
⟵पढ्ने / अध्ययनमा बानी बसाल्ने सुत्रहरु
बालबालिकाले के कसरी सिक्छन ?⟶